NDỊ NKUZI NA-AKUZI NKUZI N’ONITSHA SOUTH LOCAL GOVERNMENT AREA, MAKA AJỌ ỌNỌDỤ ASỤSỤ IGBO | Igboniile
NDỊ NKUZI NA-AKUZI NKUZI N’ONITSHA SOUTH LOCAL GOVERNMENT AREA, MAKA AJỌ ỌNỌDỤ ASỤSỤ IGBO
Wed, 04/18/2012 - 22:13 | Site Manager
ỌKPỤRỤKPỤ ISIOKWU DỊ GA N’OKWU NDỤBISI R. EKEGBO GWARA NDỊ NKUZI NA-AKUZI NKUZI N’ONITSHA SOUTH LOCAL GOVERNMENT AREA, MAKA AJỌ ỌNỌDỤ ASỤSỤ IGBO, KA ỌNWA JANUARỊ, 2012, DỊ NA IRI ABALỊ ATỌ NA OTU.
Ụmụ Igbo, omenala Igbo na asụsụ Igbo dị ezigbo mma ma dịkwa ezigbo mkpa na Nigeria. Ya mere na ịhụ na agbụrụ a, asụsụ a na omenala ya na-adịwanye mma, na-agawanye n’ihu, obere okwu a ga-elebanye anya n’ihe olenaole, ndị gụnyere nsogbu dị iche iche na-eche ụmụ Anambra aka mgba etu o si emetụtakarị asụsụ na omenala Igbo, ihe na-ewetekarị nsogbu ndị a, ebe na etu ha si ebido. Ajụjụ dị ezigbo mkpa maka nke a gụnyere: anyị maara na nsogbu ndị a dị? Kedu etu anyị si enye aka nsogbu ndị a ịka njọ maọbụ ibelata. Mbọ nkụzi a gbara bụ mbọ ịrụtụ ụfọdụ n’ime nsogbu niile ndị a aka. Ọ gbakwara mbọ iweputa atụmatụ ụfọdụ ga-enye aka ịkwụsị ha na ihe ndị a ga na-eme iji inwewanye agamnihu. Obere nkuzi a nyekwara aka ịhụ na onye ọ bụla ga-enweta ya ga-esi na ya were mụta ihe ndị ga-abụ na ọ bụrụ na e etinye ha n’ọrụ, ha abaara onye ọ bụla uru, ma wetara ndị ọ ka were dị mkpa ezi agamnihu.
Ala Igbo bụ akụkụ ọwụwa anyanwụ dị na Nigeria a na-akpọ South East. Steeti dị n’akụkụ a a na-ekwu maka ya dị ise, ndị bụ Abịa, Anambra, Ebonyi, Enugu na Imo. A na-agụnyekwa Steeti Rivers na Delta n’ihi na ihe karịrị ọkara ndị Steeti ndị ahụ na-asụkwa asụsụ Igbo. Obodo niile dị na steeti ndị a niile a kpọrọ aha ebe a, nwere otu ụdị omenala, ọdịnala, nghọta na ihe ndị ọzọ dị iche iche ha jiri were eyi ibe ha. Otu n’ime ihe niile obodo ndị a nwere dịka otu ndị bụ otu ụdị asụsụ. Aha asụsụ ha na-asụ bụ asụsụ Igbo.
Asụsụ Igbo bụ nnukwu ihe Chineke jiri gọzie agbụrụ a na-akpọ ụmụ Igbo. Etu ahụkwa ka O siri were otu ụdị omenala, ọdịnala na otu ụdị mmụọ e ji eme ihe, aghọta ihe; otu ụdị mmụọ e ji echu uchu, agba mbọ gọzie ha.
Mana ihe bụ nsogbu ụgbua bụ na mọnkị ji omume ya eme ka a ga-asị na ọgọdụ anaghị amasị ya. Nke a bụ makana ụmụ Igbo ejighi ihe niile a Chineke jiri were chọ ha mma n’ụdị asụsụ na omenala were eme ihe. Ụmụ Igbo akpọghị mwere Nigeria weere asụsụ Igbo dịka otu n’ime nnukwu asụsụ atọ dị mkpa na Nigeria were eme ọnụ. Ihe a ga-akọwa n’obere nkuzi a bụ etu ụmụ Igbo si were emeso asụsụ Igbo omume na mbọ otu SỤWAKWA IGBO na mmadụ olenaole na-agba ịhụ na asụsụ Igbo alaghị mgbuka. Nkuzi a ga-amakwa onye ọ bụla na otu ọ bụla, ọ kacha ndị Igbo bị na Warri aka n’ihu ịgba mbọ inye aka ka e si na ụmị asụsụ Igbo na-adanye gụpụta ya.
OTU SỤWAKWA IGBO na NDỊ ISI OTU SỤWAKWA IGBO
Ozi ekele si n’aka Onyeisi OTU SỤWAKWA IGBO
Nsogbu na-echere asụsụ Igbo na omenala Igbo aka mgba.
Anaghị ede asụsụ Igbo ede.
Anaghị agụ ihe ndị e dere n’asụsụ Igbo
Anaghị asụrụ ụmụaka anyị asụsụ Igbo.
Ọdachi si na nleghara anya a na-eleghara asụsụ Igbo abịa:
Ịgba mbọ iwepu ya n’asụsụ Nigeria.
Ndị ọha mmadụ, (tinyere gị onwe gi ma a kpachapụghị anya), anazighi akpọ ihe metụtara ọgụgụ na odide asụsụ Igbo ihe.
Mbọ OTU SỤWAKWA IGBO gbarala kamgbe o bidoro.
O nweela mkpụrụ dị iche iche asụsụ Igbo mịtarala eri e bidochara ya. Ụfọdụ bụ:
Ịzụ otu nye na nnukwu ụlọakwụkwọ.
Ime ka ọ bụrụ iwu na a ga na-eyi akwa ọdịnala ga ọrụoyibo ụbọchị Wenezdee niile na Steeti Anambra.
Ime ka gọọmenti mee ya ka ọ bụrụ iwu na nwata akwụkwọ ga-ele ya ma lafee n’ule ya na Junior WAEC tupu ọ gụwa Sekọndịrị nke ukwu.
Iwegodu ndị lere ma lafere n’ule asụsụ Igbo na WAEC tupu e wewe ndị e leghi ya (ọ dị mkpa ebe a ịkọwapụtakwara anyị na gọọmenti Nigeria kwuru na nwa afọ Nigeria ọ bụla ga-elerịrị otu asụsụ Nigeria na WAEC).
Ime ka a na-edezi ọtụtụ ihe (dịka broshuu, akwụkwọ akpọmoku, oziekele nnọọ na nke gaa nkeọma, dgz.), n’asụsụ Igbo, n’ọgbakọ nzụkọ ụka na nke gọọmenti n’ogo dị iche iche.
Ịga njem ka ọha mara n’ụlọ ụka dị iche iche, n’otu ndị ọchịchị gọọmenti n’ogo dị iche iche, na n’ụlọ akwụkwọ n’ogo dị iche iche.
Ime ka otu ọ bụla OTU SỤWAKWA IGBO zigaara oziọma ajọ ọnọdụ asụsụ Igbo na omenala dee ma weputara otu a mkpebi ha maka ọnọdụ asụsụ na omenala Igbo oge ugbua.
Dayosis Nke Awka iweputa otu Ihu akwụkwọ n’ime akwụkwọ akụkọ Fides Newspaper maka ide ihe n’asụsụ Igbo na ya oge ọ bụla (nke ọ bụ mụ onwe m na-ahụ maka ya.
Iguzowe asọmpi dị iche iche maka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo n’ogo dị iche iche.
Ịdọta gọọmenti Steeti Anambra Ime ọtụtụ ihe maka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo.
IWU ỌKPỤ NDỊ OTU SỤWAKWA IGBO
Mkpebi ndị Anambra Steeti bi Warri maka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ga-abụzi gịnị?
(Unu mechaa mkpebi nke unu, unu edetuo nye m ka m were nye ndị zitere m ka ha mara na m bịara ebe ha ziri m).
Dịka anyị siri hụ, ihe obere nkuzi a mere bụ idepụakarị na ọgbara n’ọgbara Nnukwu ihe bụ asụsụ na omenala Igbo Chineke jiri chọọ ụmụ Igbo mma. Nkuzi a kọwakwara etu ndị mmadụ si emeso asụsụ Igbo na omenala Igbo omume, ọ kachasị asụsụ Igbo. Ụfọdụ mmadụ na-egbu asụsụ Igbo egbu, ebe ụfọdụ na-azọ ya azọ. Mana mbọ nkuzi a gbara n’ikpeazụ bụ ịdụ ọdụ ka onye ọ bụla, ọ kacha ụmụ Igbo zọwa asụsụ Igbo azọ. Ya mere o jiri tụọ arọ ụfọdụ, kwuo ihe onye ọ bụla kwesiri ime maka iwelite asụsụ Igbo ma hapụ ya n’ogo kwesiri ya iji gbalahụ ụta ga-adị n’ihu ma a chọọ ya a hụzighi ya.
Akwụkwọ ndị e derela ede n’asụsụ Igbo.
Onye mara ebe ọ ga-esi kwalitewe asụsụ Igbo, omela.
MBEKU DỊ MKPA MAKA www.igboniile.org
O kwere anyị ghọta, ma na-ewutekwa anyị na webusaịtị a bụ www.igboniile.org, nke bụ maka ịkwalite ọdịnala, omenala na asụsụ Igbo n’ụzọ izugbe, enwetabeghi ọtụtụ ihe dị mkpa a chọrọ maka ebumnobi e jiri hiwe ya. N’ihi ya, ndị nlekọta na-arịọ ederede site n’aka gị.
1. Ọ ga-abụ n’asụsụ Igbo.
2. I nwere ike ide maka ihe ọ bụla sọrọ gị.
3. Ị chọọ, denye aha gị (mana cheta na ọ bụ ihe ga-agazu ụwa niile).
4. Ọ bụrụ na I mere nchọcha maka nzere digirii ọ bụla, I nwereike kọpịta
nnyocha agụmagụ (Literature review) gị.
MKPA Ọ DỊ:
Ọkwa a dị mkpa maka:
1. Ọ bụ nwafọ Igboniile ka ọ dịịrị ịkwalite asụsụ na omenala Igbo na-anwụzi
2. Ọ dị mkpa maka ụmụafọ Igbo na-agụ akwụkwọ ịhụ ihe ha chọrọ maka ide ihe
gbasara ọdịnala, omenala, na asụsụ Igbo na nchọcha ha.
3. Ọ dị mkpa ime ka Igbo bụrụ Igbo (izugbe), ya na iji otu nghọta na-akọwa, ma
na-aghọta ihe dị n’ala Igbo anyị.
MATA NKE A:
Ka ndị nlekọta webusaịtị a na-arịọ mgbaghara maka ndị enwetewebeghi ihe ha chọrọ site na webusaịtị a, ka anyị na-asị onye nwere ntụziaka, aro, maọbụ ihe ọ chọrọ ka e weputara ya na ya, ka o detere anyị echiche ya.
MAKA INWETA ANYỊ NA IDETERE ANYỊ IHE, SI NA:
maọbụ kpọọ 08082406727
-Ndị nlekọta webusaịtị